WARBIXIN: Maxay Kooxaha Ugu Waaweyn Yurub Uga Baahan Yihiin Suuqa Xagaaga? – Wararka Ciyaaraha Maanta
Finalka champions League ee la ciyaari doono 1 bisha June ayaa soo afjari doona xilli ciyaareedka 2018/2019 waxana furmi doona suuqa kala iibsiga xagaaga iyada oo la filayo in ay kooxo badan oo reer yurub ah lacag badan suuqa galiyaan.
Kooxaha Sida Real Madrid, Atletico Madrid & Manchester United ayaa suuqa u gali doona si ay dib u dhis ugu sameeyaan kooxda halka ay kooxaha Barcelona, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Juventus & Manchester City suuqa u gali doonaan sidii ay u dhisi lahaayeen koox ku guulaysata champions League xilli ciyaareedka dambe.
Hadab waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa waxa u soo socda kooxaha waaweyn ee yurub marka la gaadho suuqa kala iibsiga xagaaga.
Kadib xilli ciyaareed niyad jab leh, Real Madrid ayaa la filayaa in ay bilowdo dib u dhis kooxdeeda ah iyada oo haatanba la soo saxiixatay xiddiga daafaca Fc Porto ee Eder Militao xilli la filayo in lagu dhawaaqo saxiixa Eden Hazard kadib Finalka Europa League.
Luka Jovic ayaa ah weeraryahanka ay kooxdu doonayso in ay ku xoojiso weerarka halka khadka dhexe lala xiriirinayo xididgaha hristian Eriksen, Paul Pogba & Donny van de Beek.
Xiddigo kale oo intaas ka badan ayaan meesha laga saari karin in ay yimaadaan laakiin waxa jirta xiddigo u baahan in ay ka tagaan kooxda kuwaas oo kala ah Gareth Bale, Isco, Keylor Navas, James Rodriguez & Mateo Kovacic iyo dhawr xiddig oo kale.
Kooxda Atletico Madrid ayaa diirada saari doonta xoojinta daafaca marka loo eego in ay kooxda ka tagi doonaan xagaaga Lucas Hernandez, Diego Godin, Juanfran & Filipe Luis si la mid ah in ay xiddigaha Santiago Arias & Nikola Kalinic la filayo in ay ka tagaan kooxda.
Waxa jirta sidoo kale koox doonaysa in ay bixiso lacagta lagu bur-burin karo heshiiska xiddiga khadka dhexe ee Rodri oo dhan 70 milyan oo euro.
Atletico ayaa haatanba u dhaqaaqday saddex xiddig kuwaas oo kala ah Alex Telles, Hector Herrera & Felipe Monteiro halka a sidoo kale xiiso u qabto xiddigaha Mauro Icardi, Edinson Cavani & Paulo Dybala oo ay u aragto badalka Antoine Griezmann.
Inkasta oo ayna Red Devils u soo bixin champions League xilli ciyaareedka dambe hadana waxa ay wali leeyihiin awood dhaqaale oo ay ku soo jiitaan xiddigo waaweyn.
Kooxda ayaa waayi doonta xiddigaha Ander Herrera, Antonio Valencia, Alexis Sanchez, Juan Mata & Marcos Rojo kuwaas oo ka tagi doona Old Trafford.
Mustaqbalka xiddigaha Paul Pogba iyo David De Gea ayaa sidoo kale shaki weyn ku jiraa haatan.
Kadib Markii ay wakhti horeba la soo saxiixatay Frenkie de Jong, Barcelona ayaa sidoo kale ku dhaw in ay kooxda Ajax kala heshiiso daafaca Matthijs de Ligt wax walbana waxa ay tilmaamayaan u dhaqaaqista Barcelona ee Antoine Griezmann.
Kooxda ayaa u baahan in ay xiddigo iibiso si ay u hesho lacagta ay ugu dhaqaaqayso labada xiddig waxana ay haatan suuqa dhigtay xiddigaah Philippe Coutinho, Samuel Umtiti & Ivan Rakitic.
Sidoo kale waxa kooxda ka tagi kara Jasper Cillessen, Malcom, Nelson Semedo, Marc Cucurella, Andre Gomes & Denis Suarez kuwaas oo aan mustaqbal ku lahayn kooxda.
Inkasta oo ay ku dhaw yihiin in ay ku guulaystaan horyaalka markii 7-aad oo xiriir ah kooxda Bayern Munich ayaa doonaysa in ay lacag fiican suuqa galiso iyada oo lala xiriirinayo xiddigaha Timo Werner, Griezmann, Kai Havertz iyo xiddiga garabka ciyaara ee Callum Hudson-Odoi.
Kooxda ayaa haatanba suuqa galisay lacag ku dhaw 118 milyan iyada oo kula soo saxiixatay Lucas Hernandez, Benjamin Pavard & Jann-Fiete Arp laakiin bixitaanka xiddigaha Rafinha, Arjen Robben & Franck Ribery ayaa kooxda ku qasbi doona in ay suuqa si fiican u gasho.
Tababare Thomas Tuchel ayaa qirtay in uu doonayo in uu la soo saxiixdo 4 xiddig gaar ahaan xiddigo khadka dhexe ah isaga oo doonaya Donny van de Beek, Idrissa Gueye, Tanguy Ndombele, Allan xilli ay kooxdu haatanba meel sii dhigatay xiddiga Ander Herrera.
Goolhaye David De Gea ayaa sidoo kale ka mid ah Liiska xiddigaha ay PSG doonayso si la mid ah daafaca kooxda Atletico Madrid ee Filipe Luis, xiddiga garabka uga ciyaara Lille ee Nicolas Pep iyo xiddiga khadka dhexe ee James Rodriguez.
Si kasta ha ahaatee kooxda ayaa xiddigo badan waayi doonta kuwaas oo kala ah Adrien Rabiot & Gianluigi Buffon kuwaas oo xor ku tagaya iyo xiddigaha Jese Rodriguez, Thomas Meunier, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Christopher Nkunku & Stanley Nsoki oo ay doonayso in ay iska iibiso.
Aaron Ramsey ayaa wakhti hore ku biiray kooxda Juventus isaga oo si xor ah ugaga biiray kooxda Arsenal halka ay kooxda ku guulaystay horyaalka Serie A-da xiiso u qabto xiddiga Rabiot.
Xiddigaha Miralem Pjanic & Paulo Dybala ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay isaga tagaan kooxda hadii ay dalabyo fiican u yimaadaan.
Tababare Pep Guardiola ayaa suuqa u gali doona daafaca iyo laba xiddig oo khadka dhexe ah iyada oo lala xiriirinayo daafaca Leicester City ee Harry Maguire iyo xiddiga khadka dhexe ee kooxda Atletico Madrid ee Rodri si la mid ah xiddiga kooxda Lyon ee Houssem Aouar halka ay sidoo kale doonayaan xiddiga khadka dhexe ee weerarka ee Joao Felix.
Xiddigaha Eliaquim Mangala, Nicolas Otamendi & Ilkay Gundogan ayaa laga yaabaa in ay dhamaantood isaga tagaan kooxda xagaaga si ay kooxdu boos ugu banayso xiddigaha cusub.